Sierra Leone sy Guinée | Diary 2014
NISY zanaka hazo kapoaka nitsimoka teo akaikin’ny vavaranon’ny Reniranon’i Sierra Leone, tokony ho 500 taona lasa izay. Namaka izy io ary nitombo nandritra ny 300 taona. Nisy zavatra nahonena nitranga anefa nandritra izany fotoana izany. Lehilahy sy vehivavy ary ankizy efa ho 150 000 no nandalo teo anoloan’io hazo io, ary naondrana an-tsambo mba hamidy ho andevo tany ivelany.
Ilay Hazo Kapoaka mampahalaza an’i Freetown
Andevo an-jatony no nanao fety teo ambanin’ilay Hazo Kapoaka, tamin’ny 11 Martsa 1792. Nafahana avy tany Amerika mantsy izy ireo, ary naverina tatỳ Afrika. Nanorim-ponenana teo izy ireo, ary nantsoiny hoe Freetown ilay tanàna, ho mariky ny fahafahana efa nandrandrainy hatry ny ela. Nihamaro ny andevo tonga, ka lasa nisy foko afrikanina 100 mahery tao. Ilay Hazo Kapoaka no nataon’izy ireo mariky ny fahafahana sy ny fanantenana.
Efa ho 100 taona izao ny Vavolombelon’i Jehovah eto Sierra Leone no miresaka amin’ny olona hoe mbola hisy ny fahafahana lehibe lavitra, dia ny “fahafahana be voninahitr’ireo zanak’Andriamanitra.” (Rom. 8:21) Tsy handevozin’ny ota sy ny fahafatesana intsony ny olona, rehefa hitondra fiadanana ny Fanjakan’ny Mesia sady hanova ny tany ho Paradisa.—Isaia 9:6, 7; 11:6-9.
Efa 50 taona koa izao ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah eto Sierra Leone no miandraikitra ny asa ao Guinée. Nisy olana ara-politika, ara-tsosialy, ary ara-toe-karena tao amin’io firenena io, ka maro no lasa nanaiky ny hafatra mampahery avy ao amin’ny Baiboly.
Nitory ny vaovao tsara foana ny Vavolombelon’i Jehovah teto Sierra Leone sy Guinée, na teo aza ny olana maro. Anisan’izany ny fahasahiranana, fahantrana, herisetra, tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra, fombafomba efa raiki-tampisaka, foko misara-bazana, ary herisetra mahatsiravina. Ho hitantsika ato fa tena nahafoy tena ireo mpanompon’i Jehovah ireo, ary tsy voahozongozona ny finoany. Mino izahay fa hanohina ny fonao ny tantaran’izy ireo ary hanatanjaka ny finoanao an’ilay “Andriamanitra manome fanantenana.”—Rom. 15:13.
Fantaro bebe kokoa ny momba an’ireo tany ireo, ny mponina ao aminy, ny fivavahany, ary ny fiteniny.
Tamin’ny 1915 no tonga tao Freetown ny mpanompon’i Jehovah vita batisa voalohany. Maro ny olona liana tamin’ny Baiboly.
Nanao tetika hampanginana ny vahoakan’Andriamanitra ny mpitondra fivavahana, nefa ‘natsingerin’i Jehovah teo an-dohan’ireny ny ratsy nataony.’
“Nifantoka tanteraka tamin’ny tenin’Andriamanitra” ny Fiangonana Freetown.
Indroa isan-kerinandro i Zachaeus Martyn no nandeha valo kilaometatra niaka-nidina tendrombohitra, rehefa hivory. Nahoana izy no nanaiky ny fahamarinana?
Nitory tany amin’ireo nosy any Karaiba sy tany Afrika Andrefana i William Brown. Nahoana izy no nilaza fa nahazo ny tombontsoa lehibe indrindra ananan’ny olona?
Nitatra be ny asa fitoriana. Tonga nanampy tamin’izany ireo misionera.
Nalefa tao Freetown, Sierra Leone, ilay video hoe Ny Fitambaran’olon’ny Tontolo Vaovao Miasa, tamin’ny 1956. Mba hisy mpijery ve izy io?
Malaza ho mpanaja ny fanambadiana ny Vavolombelon’i Jehovah any Sierra Leonesy Guinée.
Nahoana ny mpitarika tao amin’ny Poro no nametraka volavolan-dalàna tao amin’ny Antenimiera mba hanafoanana ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah?
Misy heriny eo amin’ny fiainan’ny olona ve ireo fikambanana miafina any Afrika Andrefana?
Mampianatra ny olona hamaky teny sy hanoratra ny fiangonana mba hahatonga azy ireo handroso ara-panahy. Vao mainka ilaina ny fandikan-teny vokatr’izany.
Ahoana no nahafahan’ireo rahalahy niampita tany Guinée mba hamonjy fivoriambe na dia tsy nanana pasipaoro aza?
Te hanatrika ny Fianarana Baiboly Ataon’ny Fiangonana i Jay Campbell, izay voan’ny lefakozatra. Nilaza izy fa hampiasa ny akalana keliny roa. Tonga tokoa ve izy?
Nampahery sy nanome fanantenana avy ao amin’ny Baiboly ny Vavolombelon’i Jehovah nandritra ny ady an-trano tany Freetown. Jereo ato fa tena be herim-po izy ireo.
“Tsy nitsahatra nampianatra sy nitory ny vaovao tsara” ny Vavolombelon’i Jehovah, na dia tao anatin’ny ady aza.
Tadidin’ny ankizy miaramila iray fa noraisina tsara izy rehefa nivory tany amin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Nahoana izy no nanapa-kevitra ny hiova?
Nahoana ny Vavolombelona maro no tsy nisy naninona, na dia teo aza ny korontana sy ny vonoan’olona tao Pendembu, rehefa nipoaka ny ady tamin’ny 1991?
Mpitondra entana nandritra ny ady an-trano ny Vavolombelona iray. Ahoana no nahafahany nitondra taratasy sy entana niala tao Freetown nankany Conakry, Guinée?
Nitrandraka diamondra no asan’i Tamba Josiah tamin’izy mbola tsy Vavolombelona. Nahoana izy no nilaza fa nahita zavatra sarobidy kokoa noho ny diamondra?
Nony vita ny ady, dia nisy fiangonana niforona, nisy efitrano naorina, ary nisy mpisava lalana manokana nalefa tany amin’ny toerana vitsy mpitory.
Mino ny Vavolombelon’i Jehovah ao amin’ireo tany ireo fa mbola maro ny olona handray ny vaovao tsara ao amin’ny taniny.
Nandositra i Philip Tengbeh mivady rehefa nibodo an’i Koindu ny mpikomy. Vonona hanompo an’i Jehovah izy ireo, ka anisan’ireo nanorina Efitrano Fanjakana dimy tamin’izy ireo nipetraka tany amin’ny tobin’ny mpitsoa-ponenana.
Efa hatramin’ny 1992 i Cindy McIntire no misionera tany Afrika. Tantarainy ato hoe inona no tena itiavany mitory any Sierra Leone.